Home News Sadaq John oo dalacsiiyay kooxdiisii dilka ee xasilinta, kuna biiriyay ciidanka...
Sadaq John oo dalacsiiyay kooxdiisii dilka ee xasilinta, kuna biiriyay ciidanka booliiska
Saadaq John oo RW Kheyre dhawaan u dalacsiiyay in uu noqdo taliyaha Ciidanka Booliiska ee Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu horay u sii kaxeeystay in ka badan 25 qofood oo ah kooxihii ay isaga iyo RW Kheyre adeegsan jireen dilalka kala duwan ka dhacayay magaalada Muqadishu. Talaabadaan ayaa waxa ay cadeeynaysaa in Xassan Cali Kheyre uu ku jiro damac ah in uu koox beeleedkii xasilanta ay shaqadeedii u sii wadato isaga oo markaan isticmaalayso magaca ciidanka Booliska Gobolka Banaadir.
Waxaa horay loo burburiyay ciidankii nabadsugida NISA ee gobolka Banadir waxa hadda muqato in iyadana la doonayo in la burburiyo ciidanka booliska ee Gobolka Banaadir oo ka amar qaadan doono RW Kheyre iyo wiilka ay ehelka yihiin ee Yahya Cali Hareeri. Dhanka kale Eng Yarisow ayaa u muuqada mid howlgab ah oo magic u yaal joogo.
Previous articleRW Kheyre: Puntland in ay difaacdo shacabkeda waa xaq, DF waxaa ka go’an in ay garab istaagto!
Next articleAqriso:Safarka MW Farmaajo ee Asmara Masababi karaa Khilaaf ka dhex Curta Dowladaha Wallaha ah ee Sooomaaliya iyo jabuuti